Toa efa narahin'ireo olon-dratsy mihitsy ilay fiara raha ny fandinihina ity raharaha ity. Ny antony dia avy hatrany dia fantatr'ireo jiolahy tao anatin'ny maro ny olona izay horobaina.
Tonga marobe ny mpanao gazety nandritry ny fifampiarahabana voalohan'ny taona izay nokarakarain'ny Holafitra. Ny tsikaritra dia ny fiombonam-peon'izy ireo manohitra ny antsonjay izay hataon'ny minisitera ny Holafitr'ireo mpanao gazety. Tadiavin'ny minisitra Lalatiana hidirana indray mantsy io rafitra io ary hakorontana mba hahafahany mametraka mora foana ny olony.
Nahafaty olona indray ny lozam-pifamoivoizana teo amin'ny moto.sy fiara omaly. Tetsy Soavinimerina, RN3 dia maty tsy tra-drano ny mpandeha scooter iray raha nifandona tamin'ilay kodiaran-droa. Raha ny filazan'izay nahita dia nandeha mafy loatra ilay moto ary tsy tafajanona intsony raha vao nifanena tamin'ilay fiarabe.
ZANAKY NY FARITANIN’I FIANARANTSOA
Tsy maintsy hijery akaiky momba ny raharaha fanenjehana an'i Claudine Razaimamonjy sy ny fananany i Christine Razanamahasoa amina maha zanaky ny faritanin'i Fianarantsoa azy. Ekena fa tsy misy ny ambonin'ny lalàna saingy mila jerena ambony ambany avokoa ny antony rehetra hanaovana izao fanenjehana azy izao hoy ny filohan'ny antenimieram- pirenena. Eto arak'izany no tena hita hoe mifanampy tokoa sa mifanenjika ireo zanaky ny faritanin'i Fianarantsoa ireo.
Atsipin'ny mpomba fitondrana any amin'ny HVM sy ny TIM indray ny rihatra sy ny fahadisoana nahatonga ireo anarana miverina tao anaty ny lisi-pifidianana sy ny CIN fosika vao navoakan'ny CENI farany teo. Mailo ary tsy manaiky ho diso mihitsy ny mpitondra amin'izao ary matahotra mafy sao ifaharan'ny tsiny no nanao ny halabato goavana noho ireo CIN hosoka be dia be ireo. Hafanafana ny tohin'ny raharaha ary mbola mahagaga koa ny antony nahatonga ny CENI izao vao manao ireny ampamoaka ireny.
Efa nampitandrina sahady ny ministeran'ny serasera fa am-polony ireo onjam-peo mety hikatona ato ho ato rehefa tsy ara- dalana. Manahy sahady anefa ny rehetra fa efa endrika fanapenam-bava sy famerana ny demokrasia izao fihetsika ataon'ny ministera izao matoa hanakatona radio sy haino aman-jery.
# Kitoatoa be ny fanamboarana an'i Mahamasina. Ny tena anton'izany dia terana handeha mafibe ny asa kanefa ny fitaovana sasany aza mbola taraiky any Chine hatramin'izao. Vokatr'izany dia mandeha ila ny fanamboarana ary manomboka very hevitra ireo tompon'andraikitra amin'ny fomba hitondràna ny asa.